China 2021 mpanamboatra kalitao avo lenta mandrehitra fandroana fandroana orinasa sy mpamatsy | Belle
2021 koveta fandroana akrilika mpamokatra kalitao avo indrindra
Est. Fotoana (andro)
Logo namboarina (Min. Order: 10 Pieces)
Fonosana namboarina (Min. Order: 10 Pieces)
Fanamboarana sary (Min. Order: 10 Pieces)
Warranty: 5 taona, 5 taona Fitaovam-piadiana: tsy misy
Serivisy aorian'ny fivarotana: Fanohanana ara-teknika an-tserasera, Fantsona maimaimpoana maimaim-poana, TSY MISY Style: tokana
Halavany: 1.5m Fahafahana vahaolana amin'ny tetikasa: famolavolana sary, famolavolana modely 3D, vahaolana tanteraka ho an'ny tetikasa, Fanamafisana ny sokajy Cross, TSY MISY, Hafa
Fampiharana: Hotely, Fandroana anaty trano Style Design: ANKEHITRINY
Toerana niandohana: Anhui, Sina Anaran'ny marika: OEM
Model Model: 9003 Fitaovana: Acrylic, acrylic madio
Function: hahavonto Fametrahana karazana: tokana
Drain Toerana: ahitsy Loko: fotsy
Anaran'ny vokatra: acrylic bahtutb Habe: 1500 * 700 * 560mm
Endrika: manodidina Karazana: fotsy mainty
Fomba fanaraha-maso: Fanaraha-maso ny tanana Anarana: fivarotana mafana CE, CUPC fandroana fandroana freestanding boribory avo lenta
2000 Piece / Pieces isam-bolana CE, CUPC fandroana fandroana freestanding boribory avo lenta
Fandroana tsotra acrylic
Toetra mampiavaka ny fitaovana
Malemy sy marefo ny fitaovana, izay mahatonga azy io hadio sy milamina, izay manampy amin'ny fanadiovana sy fikojakojana
Fandroana fandroana fandroana
Raha ny fametrahana ny kovetabe fandroana tsy miankina dia tsy misy ifandraisany amin'ny tatatra fotsiny ny farany ary ny tapany ambony dia mifandray amin'ny fantsona fidirana rano. Satria avo ny zoro efatra amin'ny fanohanana ambany, mety kokoa koa ny fanadiovana.
na avy aiza na avy aiza.
Inona no tokony hojerentsika amin'ny fametrahana fandroana freestanding?
Ny fandroana ho an'ny olona dia tsy karazana fiainana fotsiny, fa koa zavakanto sy kolontsaina. Miaraka amin'ny fiovan'ny fotoana, ny foto-pisainana amin'ny fandroana dia nivoatra tsikelikely tamin'ny dikany ara-kolontsaina sy ny endrika isehoany isan-karazany. Any Sina Avaratra ankehitriny, misy trano fandroana ho an'ny daholobe, ary ny kolotsaina fandroana dia miorim-paka lalina ao am-pon'ny olona.
Noho izany, ny olona maoderina dia mitandrina fatratra amin'ny fandroana, koa mba hananana traikefa fandroana tsara kokoa dia zava-dehibe tokoa ny mifidy andiana fitaovana fandroana tsara. Ankehitriny dia mihamaro ny olona manomboka mametraka kovetabe fandroana ao an-trano hamaly ny filan'izy ireo ara-panahy.
Fitaovana fandroana ho an'ny tsirairay ny fandroana. Ny endrika lehibe amin'ny kovetabe fandroana dia tafiditra sy mahaleo tena. Ity lahatsoratra ity dia manolotra indrindra ny fomba hisafidianana ny kovetabe fandroana tsy miankina? Ary ny antsipirian'ny fametrahana fandroana maimaim-poana.
1. Inona ny kovetabe fandroana tsy miankina?
Fandroana mahaleo tena, izany hoe, ny kovetabe fandroana dia apetraka mivantana amin'ny gorodon'ny fandroana, madio ao anatiny sy ivelany, tsy miankina amin'ny rindrina na apetraka tsy miankina ao amin'ny trano fidiovana. Ity fomba ity dia mety amin'ny fananganana sy mora amin'ny fikojakojana, ary mety amin'ny fisafidianana rehefa voaravaka ny tany.
2. Fitaovana fandroana
Vita amin'ny akora voajanahary artifisialy, endrika manankarena, lanja maivana, famaranana tsara sy ambany ny vidiny.
3. Tombony sy fatiantoka fandroana tsy miankina
Tombony: tsy mila manangana sehatra, fametrahana mora
Tombontsoa: takiana avo amin'ny faritra fandroana, fametrahana sy fandrindrana tena amin'ny tontolo manodidina
4.Indray antsipirian'ny fametrahana fandroana maimaim-poana
1. Alohan'ny hametrahana azy dia zahao ny haavon'ny koveta amin'ny fandroana ary mety ve ny toerana eo aloha, aoriana, havia ary havanana.
2. Hamarino raha toa ka tonga lafatra ny fantson-drano amin'ny fandroana.
3. Alohan'ny hametrahana ny kovetabe fandroana miaraka amin'ny tohana, zahao raha fisaka ny tany mba hisorohana loza.
4. Ho an'ny fidirana sy fivoahan'ny koveta fandroana dia ilaina ny mitahiry ny fidirana sy ny fivoahana na fantsona ilaina alohan'ny hametrahana ny kovetabe tsy miankina. Rehefa apetraka dia mila manakaiky ny rindrina izy io, manana 20cm-30cm farafahakeliny voatokana, manome faritra azo ampiasaina mihoatra ny roa metatra toradroa.
5. Mety tsara ny fametrahana ny kovetabe fandroana tsy miankina. Ny ambany dia mifandray fotsiny amin'ny tatatra ary ny tapany ambony dia mifandray amin'ny fantsona fidirana rano. Satria avo ny zoro efatra amin'ny fanohanana ambany, mety kokoa koa ny fanadiovana.
Teo aloha: 2021 trano fandroana mora vidy trano fandroana akrilika vita anaty fandroana ao anaty fandroana fandroana
Manaraka: Efitra fandroana mihidy varavarana misosa amin'ny jiro ambony sy fandroana
D-Code Acrylic Bathtub
fivarotana mafana kalitao 4 acrylic freestandi avo lenta ...
amidy mafana gloss farany vita amin'ny acrylic freestanding ...